नङ फुल्दा नयाँ लुगा आउने हाेइन , राेग आउने गर्दछ - जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
कारण के हो भने रोग, रोगी र स्वास्थ्यको परिभाषा आधुनिक चिकित्सा एलोप्याथिकको कन्सेप्टभन्दा होमियोप्याथिकको अवधारणा अलिक फरक हुनुका साथै उपचार गर्ने तरिका पनि भिन्न छ ।
चिकित्सा शास्त्रको इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्राचीन कालमा आजको जस्तो रोग निदानका आधुनिक उपकरणहरू थिएनन् । त्यस बेलाका आयुर्वेदिक फिजिसियन (वैद्य) युनानी (हकिम)हरूले रोगीको शारीरिक निरीक्षणका क्रममा नाडी, जिब्रो र हातखुट्टाका नङ हेरेर रोगको निदानमात्र होइन, गम्भीर रोगको सफल उपचार पनि गर्थे ।
नङले स्वास्थ्यको कुन रहस्य प्रकट गर्छ
स्वास्थ्या नङ स्मुथ र दागधब्बारहित हुन्छ । नङको रङ र सेप एकनासको हुन्छ ।
नङ चिरिएको छ, रङ पहेँलो छ भने सम्भवत
फंगल (ढुसी) इन्फेक्सनका कारण हुनसक्छ ।
यसैप्रकार चम्मच आकारको नङले सिफिलिस, छालासम्बन्धी रोग तथा मानसिक समस्या छ भन्ने संकेत दिन्छ ।
नङ नीलो हुँदै गइरहेको छ भने अक्सिजनको कमी, श्वासप्रश्वासको रोग या मुटुरोगको कारण हुनसक्छ ।
यसै कारण कहिलेकाहीँ तानिएको क्युटिकलबाट पानी निस्किन थाल्छ । यसबाट बच्न क्युटिकललाई नरम राख्ने र नङको कुनालाई पनि ठीकसँग काट्नुपर्छ ।
होमियोप्याथिक औषधिः नङको परिवर्तित रङबाट अनेक प्रकारका नयाँ तथा पुराना रोगको पहिचान र उपचार गर्नु होमियोप्याथिकको विशेषता हो ।
Don't Miss it हामीले दैनिक जिवनमा प्रयोग गर्ने परफ्युम कति खतरनाक ? जान्नुहाेस्
Up Next सावधान ! विभिन्न राेगकाे जाेखिम हुन्छ ३० वर्ष कटेका पुरूषहरूमा